ပန်းသေးခေါက်ဆွဲ | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
← ပင်လယ်စာပဲကြာဇံသုတ်/Seafood Glass Noodle Salad
ကြက်ဆီထမင်း/Hainanese chicken rice →
14 comments on “ပန်းသေးခေါက်ဆွဲ”
10/03/2012 @ 6:14 am
Thanks so much for sharing the recipe. I LOVE Pan Thay Noodle. 🙂
10/03/2012 @ 10:55 am
10/03/2012 @ 3:27 pm
my favourite myanmar food resturant is DA NUTE PHYU.glad to read ur cooking blog.
Thank u so much for being our customer.
15/03/2012 @ 2:20 pm
ညီမလေး အိ ရေ။ ချက်စားပီးပီသိလား။အရမ်းကောင်း အရမ်းပျော်ပီး အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
15/03/2012 @ 8:02 pm
welcome ma yay. I am so happy that you like it. Thanksalots for letting me know back.
19/03/2012 @ 4:08 pm
အခုမှာတွေ့ တော့တယ် arigato
20/03/2012 @ 8:58 am
ဂရမ်းမဆလာ ၂ဇွန်း၊ မဆလာ ဘါကွာလဲဟင်? ကုလားလေး မဆလာပဲသိ တယ်။
30/05/2012 @ 8:53 am
ပြီးခဲ့တဲ့၂၇က်လောက်က မင်းမင်းအေး ၇ဲ့ အိသက်နည်းနဲ့ကြော်ထားတဲ့ပန်းသေးခေါက်ဆွဲကြော်တွေ့လို့..ဒီထဲဝင်ရှာလိုက်တာ ခုတော့တွေ့ပြီ..အ၇မ်းကောင်းတဲ့နည်းလေး အိသက်ေ၇..မကြာမီကြော်ပါအုံ့းမည်…
30/05/2012 @ 9:59 am
မရေ တပုံစံတည်းထွက်တယ် သိလာ: လုပ်စားကြည့်နော် 🙂
01/08/2012 @ 10:53 am
မအိသက် ဂရမ်းမဆလာ ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲဟင်…တကယ်မသိလို့ပါ….အမ အချိန်ရှိရင်ဖြေပေးပါလားဟင်…ရန်ကုန် ဘယ်မှာဝယ်လို့ ရတယ်ဆိုတာက်ိုပါ ပြောပြပေးပါလား အမရယ်
28/12/2013 @ 2:40 pm
i think AYAM CURRY POWDER …………. ၂၇ လမ်းမှာဝယ်လို.ရပါတယ်. ကျေးဇူးပါဗျ
28/12/2013 @ 2:42 pm